Somaliland: Wasiir Samsam Oo Noqotay Wasiirka Keliya Ee Aan Ku Jirin Olole Wasiirnimo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiir Samsam Oo Noqotay Wasiirka Keliya Ee Aan Ku Jirin Olole...
Wasiirka maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aaden, ayaa cadaysay inay xilka u banayn doonto bulshada Somaliland, iyadoo tilmaantay inaanay ka mid noqon doonin xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi, waxaanay noqotay wasiirka keliya ee cadaysay inay diyaar u tahay inaan xil wasiirnimo loo magacaabin mar kale.
Wasiir Samsam oo hadal ka jeedisay madal ay Taliska Ciidammada Qaranka ku wareejinaysay Gaadiid kuwa Ciidammada ah ee loo yaqaanno TR, waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay xilkaas banayso, “Wasaaraddan anigu waxaan u bannaynaynaa (Dadka kale), waan sheegay oo waxa laga yaabaa anigu (In aanan) dib (ugu noqon), Waayo? Marmar Caafimaad ahaan (Awgeed), Waayo? Tacab badan baa igu dhacay 7-dii Sannadood, markaa waxaan is leeyahay Dhallinyaradu Dariiqaa ha qaadaan. Waxaan u dedajinaynaa waxyaabahan (Taageerada Ciidammada) in Qofka dhallinyarada ah ee soo fadhiista meeshaydu in aanu daalin ee uu halkaa ka sii wado haddii Alle yidhaahdo.”ayay tidhi Wasiir Samsam Cabdi Aadan. Wasiirka ayay bulsho badani saadaalinayay inay iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire noqon doonaan labada wasiir ee ka soo hadhi doona xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo.
Wasiir Samsam waxay sheegtay in Ciidammada Qaranku ay Xilligii Abaartu Dalka ku dhufatay ay Caawinayeen Dadka “Iyagaa Dadka gurayey oo Caawinayey, oo Booyadahoodu u shaqeynayey (Dadkeennii Abaartu ku dhacday), Runtiina kaalin weyn ayay ka qaateen.” Ayay tidhi, waxayna intaa ku dartay inay wakhtigaa Ciidammada u qaybisay Bustayaal “Dadkii oo aanu Busteyaal u qaybinayno way nala noqon wayday in Ciidammadii oo Shaqaynaya oo Dadkii Guraya, Habeenkiina soo jeedaya inay Billaa Busteyaal noqdaan, laakiin wax yar bay ahayd marka loo eego hawsha ay qabanayeen.”
Wasiirku waxay amaantay Bilicda dhismeyaasha iyo Xafiisyada ku yaalla Xarunta Miiska Saraakiisha Milletariga ee Magaalada Hargeysa “Miiska Saraasha Beri hore ayaa iigu dambaysay, laakiin Maalintii dhawayd markaan booqday ee aan arkay Quruxda ka muuqata waxa I gashay Ididiilo ah inaan Ciidammadu dagaal iyo difaac uun ku jeedin ee ay Meel Qurux badana samaysteen.” Ayay tidhi, waxayna intaa ku dartay “Markii Taliyuhu yidhi, waxaanu dhisaynaa Deyrka qaybta 31-aad ee Ciidammada Qaranka ayaan la hadlay Ganacsatada, waxaanan ku idhi haddii Ciidammadu Dagaal ku jiraan, Hub iibsanayaan oo ay Miisaaniyaddooda wax badan ku qabanayaan, hadday dhismihiina ku soo weecdeen waa inaynu ka caawino, dhowr Qolo waxay igu yidhaahdeen wax waanu idinla qabanaynaa, laakiin Annagu Wasaarad ahaan 10 kun oo Jaajuur ah ayaanu idiin keenay, waxaanuna jecelahay inaanu idinkala shaqayno, si meeshani u yeelato Deyr qurux badan haddii Alle yidhaahdo”
Taliyaha Ciidammada Qaranka Somaliland Sareeye Guuto Nuux Ismaaciil Taani ayaa isaguna Wasiirka Maaliyadda ku amaanay Taageerada ay la garab taagan tahay Ciidammada, isago xusay in Tani aanay ahayn tii ugu horreysay “Wasiir Samsam Cabdi Aadan waxay nagu wareejisay Gaadiid TR ah oo kani ka mid yahay (Gaadhiga Warbaahinta loo soo bandhigay) iyo Qalab dhisme oo ay u baahan tahay Qaybta 31-aad ee Ciidammada Qaranku. Caawimadani maaha tii ugu horreysay ee Wasiir Samsam siiso Ciidammada Qaranka, Sannadkan gudihiisa Shan kun oo Buste ayay ku caawisay Ciidanka Jiidda hore, waxa kale oo ay nagu Caawisay raashin Qalalan. Wasiir Samsam Samo-fal badan ayay Waddanka ka geysataa, Ciidankana intaa iyo in ka badan-ba way u geysatay. Wasiir Samsam Cabdi Aadan waxaanu ugu Mahad-naqaynaa Hawlahaa Qaranka ee ay sida Hagar la’aanta ah u qabanayso.” Ayuu yidhi, Taliyaha Ciidammada Qaranku.
Intaasi ka dib, Wasiirka Maaliyadda iyo Taliyaha Ciidammada Qaranku waxay soo kormeereen Xarunta Miiska Saraakiisha ee Magaalada Hargeysa, halkaasi oo laga hirgeliyey Dhismayaal Bilicsan, kuwaasi oo iskugu jira, Qaybo loogu Talo-galay Hurdada, qaybo ay Saraakiishu ku nastaan iyo Xafiisyo.